बोईलर कुखुराको मासु खानेहरुलाई दु:खद खबर, स्वास्थ्यको लागि हानिकारक ! – Todays Nepal
बोईलर कुखुराको मासु खानेहरुलाई दु:खद खबर, स्वास्थ्यको लागि हानिकारक !
ब्रोइलर कुखुराको मासु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक : हाम्रो ध्यान यता तिर गएको छ ? वैज्ञानिकहरुले कुखुराको मासु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भएको चेतावनी दिएका छन् । भर्खरै अमेरिकामा गरिएको एक अध्ययनले कुखुराको मासु शरीरमा एन्टिबायोटिक प्रतिरोधी बन्ने तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।
अध्ययन अनुसार नेपाल र भारत जस्ता देशमा औषधी खुवाएर ब्रोइलर कुखुरा पालन गरिने भएकाले ब्रोइलर कुखुरा खाँदा मानिसमा एन्टीबायोटिक विरोधी क्षमता वृद्धी हुँदै जाने देखाएको हो ।
जसले ज्यान पनि लिन सक्छ । अध्ययनमा उल्लेख गरिए अनुसार नेपाल जस्ता मुलुकमा एन्टिवायोटिकबाट उत्पादन गरिएका कुखुरा खाँदा मानिसमा घातक शक्ति उत्पन्न हुन्छ । ‘प्रसीडिङ्ग्स अफ द नेशनल अकाडमी अफ साइन्सेस’ जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनले ब्रोइलरलाई विरामीहुनबाट बचाउँनका लागि एन्टिबायोटिक खुवाइने र त्यसबाट कुखुरामा एन्टिबायोटिक प्रतिरोधी शक्ति पैदा हुँदै जाने हुन्छ ।
जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनमा त्यस्ता कुखुराको मासु सेवन गर्दा मानिसमा पनि एन्टिबायोटिकले काम नै गर्न छोड्ने अध्ययनमा भेटिएको वैज्ञानिकले बताएका छन् ।औषधीले काम नगरेपछि सामान्य रोगबाट समेत मानिसको मृत्यु हुन सक्ने अध्ययनको दाबी छ । एजेन्सीको सहयोग
केपी ओलीले कुश्मामा रेलको स्टेशन राख्ने भनेको केहि महिनामा सुदिपले ल्याए रेलको टिकट